कसरी आईफोन 14 को साथ आईफोनको कुञ्जीपाटी ल्याग ठीक गर्ने आईफोन समाचार
आईओएस १ in मा किबोर्ड ल्याग कसरी ठीक गर्ने
म बच्चाहरू आईफोन किबोर्डमा यती छिटो टाइप गर्न सक्षम छन् कसरी आश्चर्य। तिनीहरूले दुई-पाठा औंठाको प्रयोग गर्छन् शैतानी गति संग। यो लेख तिनीहरूलाई लक्षित छ।
र म भन्छु कि यो उनीहरूको लागि जान्छ किनभने तिनीहरू ती हुन् जसले राम्रो गर्न सक्छन् यदि पछि भने तिनीहरूले देख्दछ कि कुञ्जी स्ट्रोक केही ढिलाइका साथ जान्छन् किनकी तिनीहरू आईओएस १ to मा अपडेट भएका छन्। त्यसैले यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ, र तपाईं "लग" भन्ने समस्याबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई समस्या समाधान गर्न केही समाधान दिन गइरहेका छौं।
केही उपयोगकर्ताहरूले आईफोनहरूको कुञ्जीपाटी प्रयोग गर्दा केहि "ल्याग" याद गरेको हुन सक्छ किनकि तिनीहरूले आईओएस १ to मा अपडेट गरे। बिभिन्न फोरमहरूमा, केहि उपयोगकर्ताहरु यस समस्याको बारेमा गुनासो गरिसकेका छन्।
स्पष्ट रूपमा, यो एक सफ्टवेयर समस्या हो कि कपर्टिनो निश्चित छ कि यसलाई पहिल्यै जाँच गरिरहेको छ, र अधिक संभावना छ आगामी आइओएस १ update अपडेटमा फिक्स गरियो। जब त्यो हुन्छ, हामी तपाईंलाई आफैंमा के गर्न सक्दछौं हेरौं कि त्यो कष्टप्रद ढिलाइबाट बच्न यदि तपाईं टाईपिंग जानवर हुनुहुन्छ र तपाईंले याद गर्नुभयो कि "ढिलाइ"।
1 भर्खरको संस्करणमा आईओएस अपडेट गर्नुहोस्
2 किबोर्ड शब्दकोश रिसेट गर्नुहोस्
3 निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग भण्डारण उपलब्ध छ
4 तपाईको आईफोन पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्
5 तपाईंको उपकरण पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
भर्खरको संस्करणमा आईओएस अपडेट गर्नुहोस्
हामी तपाईको उपकरणलाई एप्पलद्वारा जारी गरिएको नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्न सिफारिस गर्दछौं। तपाईंसँग यो अद्यावधिक नहुन सक्छ, र यो त्रुटि पहिले नै कम्पनी द्वारा सुधार गरिएको छ। मैले पछि वर्णन गर्ने विधिहरू प्रयोग गर्नु अघि यहाँ सुरु गर्नुहोस्।
प्रविष्ट गर्नुहोस् सेटिंग्स, त्यसपछि सामान्य, र सफ्टवेयर अपडेट। यदि तपाईंसँग कुनै पेन्डि have छ भने, यसलाई ठीक गर्नुहोस्। यदि तपाईं अप टु डेट हुनुहुन्छ भने पढ्न जारी राख्नुहोस्।
किबोर्ड शब्दकोश रिसेट गर्नुहोस्
यसले किबोर्ड शब्दकोश पुनःसेट गर्दछ।
ढिलाइको एक कारण यसको प्रयोग हुन सक्छ स्वचालित र भविष्यसूचक सुधार कार्यहरू जब तपाईं लेख्नुहुन्छ। तपाईले टाइप गर्दा तपाईको आईफोनले पृष्ठभूमिमा नयाँ शब्दहरू सिकेका हुन्छन् र भविष्यमा स्वत: सुधार सुझावहरूको लागि प्रयोग गर्दछ।
यो सबै डाटा कुञ्जीपाटी क्याचमा स .्कलन गर्नुहोस्, जसले अन्तत: उत्तरदायीता र कुञ्जीपाटीको समग्र प्रदर्शन, विशेष गरी पुरानो मोडेलहरूमा। तिनीहरूको आफ्नो कुञ्जीपाटी शब्दकोश रिसेट गर्नु हो, र यसैले क्याच खाली गर्नुहोस्।
यो गर्न, यी साधारण चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
जानुहोस् सेटिंग्स, र प्रविष्ट गर्नुहोस् सामान्य.
स्क्रीनको तल जानुहोस्, र ट्याप गर्नुहोस् रिसेट गर्नुहोस्.
यहाँ तपाईले ट्याप गर्नु पर्छ किबोर्ड शब्दकोश रिसेट गर्नुहोस्.
आफैलाई चिन्नुहोस्, र भोईला।
अब हेर्नुहोस् कि त्यो तपाईंको समस्या हो कि होइन, र यो समाधान गरिएको छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग भण्डारण उपलब्ध छ
खाता जुन उपकरण तपाईलाई त्यो किबोर्ड क्याच राख्नका लागि ठाउँ चाहिन्छ। यदि तपाईंको आईफोन भारी भार छ र तपाईंसँग सित्तैमा भण्डार छैन भने, यो कीबोर्ड मात्र होइन, लगातार "लग्स" को कारणहरू मध्ये एक हुन सक्छ। कोठा छोड्नुहोस् ताकि म आरामसँग काम गर्न सकूँ।
तपाईको आईफोन पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्
यदि कुञ्जीपाटी रिसेट प्रयास गरे पछि तपाईले ढिलाइ देख्नुभयो भने, तपाइँको टर्मिनल पुनः सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्। धेरै सामान्य सफ्टवेयर-सम्बन्धित बगहरू र यस प्रकारका ग्लिचहरू केवल तपाईंको आईफोन पुन: सुरु गरेर समाधान गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं आईफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुहार IDसाइड बटन र भोल्यूम अप बटन थिच्नुहोस् पावर अफ मेनूमा पहुँच गर्नका लागि। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं आईफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ टच आईडी, मात्र थिच्नुहोस् र पावर बटन होल्ड गर्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईं सेटिंग्स को माध्यम बाट आफ्नो iPhone बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
थपको रूपमा, तपाईले आफ्नो आईफोनलाई पुनःस्टार्ट गर्न पनि कोशिश गर्न सक्नुहुनेछ, अघिल्लो भन्दा "अधिक जनावर" विधि। तातो रिसेट। आईफोनमा भौतिक घर बटनहरूको साथ, यो केवल पावर बटन र गृह बटन एकै साथ होल्ड गरेर गर्न सकिन्छ जब सम्म तपाईं स्क्रिनमा एप्पल लोगो देख्नुहुन्न।
फेस आईडीको साथ नयाँ आईफोनहरूमा, तपाईंले भोल्यूम अप बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ, भोल्यूम डाउन बटनको अनुसरण गरेर, र त्यसपछि थिच्नुहोस् र साइड / पावर बटन होल्ड गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं एप्पल लोगो देख्नुहुन्न।
तपाईंको उपकरण पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
यो कोठाको अन्तिम गोली हो। मैले अन्तको लागि बचत गरें किनकि यो कुनै श doubt्का बिना सबैभन्दा थकाउने हो। पहिले गर्नुहोस् तपाईको आईफोनको जगेडा गर्नुहोस्, र पूर्ण पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। सेटिंग्स मा जानुहोस्, सामान्य, रीसेट, र खाली सामग्री र सेटिंग्स।
यदि तपाईंले अन्तिम बुलेट प्रयोग गर्नुभयो र अझै कुञ्जीपाटी ढिलाइ याद गर्नुभयो भने, उसलाई सम्पर्क गर्नुहोस् आधिकारिक एप्पल टेक्निकल समर्थन। भाग्यशाली
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईओएस १ in मा किबोर्ड ल्याग कसरी ठीक गर्ने
एप्पलले 'भेलभेट अन्डरग्राउन्ड' को बारेमा वृत्तचित्रमा अधिकारहरू खरीद गर्छ